Wararka Maanta – Page 3
SAWIRO: Madaxweynaha Puntland oo ku dhawaaqay war ku wajahan DF Soomaaliya, kana hadlay Garacad.
September 18, 2019 puntlandtimes 1
GARACAD(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa isagoo ka hadlaya magaalada Garacad oo laga dhisayo Deked ay Ganacsato dhisanayaan ayuu sheegay in ay ogol yihiin Canshuuraha Dekedaas in ay saameyn ku yeelato dawladda Soomaaliya, […]
Sacuudiga oo dalbanaya in loo difaaco dalkooda, ka dib weeraradii Ceelasha Shidaalka lagu qaaday.
RIYAD(P-TIMES) – Boqortoyada Sacuudi Careebiya waxay bilowday dadaal caalami ah oo ay ku doonayso in ay ku hesho cid ka difaacda weerarada uga imaanaya Xuutiyiinta ay Iiraan taageerto ee kusugan gudaha dalka Yemen oo ay […]
XOG: Angola ma Qadar ayaa la wareegtay, Safarkii Sirdoonka Angola ee Muqdisho, Kulamadii Doha & Xogo kala duwan.
MUQDISHO(P-TIMES) – 10 maalmood ka hor 08, September 2019, Heshiis Is faham (MoU) ayay kala saxiixdeen dalalka Qadar & Angola, waxaana goobjoog u ahaa saxiixan Boqorka dalka Qadar Amiir Tamim Bin Hamad Al Thani iyo […]
HARGEYSA(P-TIMES) –Warar soo baxaya maalmihii u dambeeyey ayaa sheegaya in xubno iskugu jira Odayaal dhaqan iyo Xisbiyada mucaaradka qaarkood ay doonayaan in ay ka qeybgalaan caleema-Saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo horey loo shaaciyey […]
Dhawr iyo toban qof ayaa lagu soo xiray hawlgallo ciidamada milatariga Soomaaliya ka wadaan magaalada Balcad iyo agagaarkeeda, kuwaas oo la xiriirrinayo inay la shaqaynayeen kooxda Al-Shabaab oo todobaadkan weerarro dad badan lagu dilay ka […]
LAASCAANO(P-TIMES) – Taliyaha guud ee ciidamada Somaliland Jeneraal Nuux Taani Ismaaciil ayaa kormeero shaqo saaka ku tagay deegaanka Tukaraq oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland iyo Somaliland oo horey ugu dagaalamay bilowgii sannadkii lasoo dhaafay […]
BREAKING: Madaxweynaha Puntland oo gaaray Garacad & una tagay Arrin ay horey u shaacisay PTIMES.
GARACAD(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa gaaray goor dhaw magaalada Garacad ee gobalka Mudug, isagoo ay wehliyaan Maalgashadayaal u dhashay dalalkii ka qeybgalay kulankii Maalgashiga Puntland ee shalay galab ku soo dhamaaday magaalada […]
WARBIXIN: Trump oo qaaday talaabo weyn oo Soomaaliya dan ugu jirto & Villa Somalia oo ka hadashay.
WASHINGTON(P-TIMES)- Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waraaqaha Aqoonsiga Safiirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee ay Soomaaliya u magacowday Safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka, kaas oo dhawaan gaaray halkaasi. Madaxweyne Trump ayaa […]
Maxay ka wada hadleen M/weyne Farmaajo & Hoggaamiyaasha Ahlu Suna ee ay is qabteen Kheyre.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dib ugu soo laabtay Caasimadda Muqdisho, kaddib markii uu xalay kusoo xiray magaalada Dhuusamareeb wajiga koowaad ee Shirweynaha Dib-u-heshiisiinta Galmudug. Madaxweynaha ayaa ka hor inta uusan […]
XOG: M/weyne Deni oo ciidamadii ugu badnaa u diray Garacad.
GARACAD(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Garacad ee gobalka Mudug ayaa sheegaya in Kolonyo ciidamo katirsan Ilaalada Madaxtooyada ay soo gaareen magaaladaas, kuwaas oo ay wehliyaan xubno katirsan Golyaasha Puntland oo aksoo hormaray wafdiga Madaxweyne […]
Farmaajo oo Galmudug u sheegay arrimo xasaasi ah.
Madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad kajeedinayay magaalada DhuusaMareeb ayaa aad uga hadlay faa’iidada ay leedahay dawladnimada iyo In Soomaaliya ay hesho qorshe taabagal wanaagsan ah, taas oo horey loogu dhaqaajin karro. Madaxweynaha ayaa cadeeyey in ay […]
Boqor Salman: Sacuudiga waa awoodaa inuu is-difaaco
September 17, 2019 puntlandtimes 0
Boqorka Sacuudiga, Salman Bin Abdulaziz ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu awoodo inuu iska difaaco wax uu ugu yeeray “weeraradii fuleynimada ahaa” ee hakiyey kala-bar wax soo saarkii saliida dalkiisa, hase yeeshee waxa uu beesha […]
September 17, 2019 shiine maxamed 0
Jabhadan oo weli si rasmiya loo ogeyn magaca iyo hal ku dhiga ay kula dagaalami doonaan xukuumada Somaliland, ayaa haddana waxa la dareemaya dar-darta ay ka wadaan deegaankaasi, kuwaasi oo laga cabsi qabo in ay […]
Akhriso:-Shan Xisbi Siyaasadeed Oo War Xasaasi Ah Kasoo Saaray Xaaladda Galmudug
War-saxaafadeed ka soo baxay qaar kamid ah Xisbiyada siyaasadeed ee dalka jira ayaa waxaa looga hadlay War-murtiyeedkii kasoo baxay shirka dib u heshiisiinta Galmudug. Xisbiyada kala ah Midowga Nabadda & Horumarka “UPD”, Wadajir Party, Ilays, […]
September 17, 2019 puntlandtimes 1
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Ruushka u fadhiya Soomaaliya, Mikhail Golovanov oo ay ka wada hadleen xoojinta xariirka labada dowladood. Mikhail Golovanov oo Ra’iisul Wasaaraha uga mahad […]
DEG DEG: Imaaraatka Carabta oo qaaday talaabo war ka farxisay Shacabka Soomaaliyeed.
DUBIA(P-TIMES) – Dawladda Imaaraatka Carabta qeybtaada Xanaanada Xoolaha iyo Badqabkooda ayaa ku dhawaaqday in ay xayiraadii ka qaaday Xoolaha uga yimaada Suuqyada Soomaaliya oo ay ugu horeyso dekeda magaalada Boosaaso, taas oo xayiraad ay saarneyd […]
DAAWO: Waa maxay Qodobada ka soo baxay Shirka Maalgashiga ee Puntland?
GAROOWE(P-TIMES) – Puntland ayaa qabatay kulanka Maalgashiga oo ay ka qeybgaleen Madaxda Puntland iyo xubno kala duwan oo ay ku jiraan Ganacsato Ajnabi ah oo ka yimi daafaha caalamka. Kulanka, waxaa laga soo saaray warsaxaafadeed […]
XOG: Xaaf oo si adag u diiday talaabooyin ay DFS ka wado magaalada Dhuusa-Mareeb.
DHUUSA(P-TIMES) – Madaxweynaha Galmudug ee waqtigu ka dhamaaday Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo xalay ka hadlayay shirkii Dibu heshiisiinta Galmudug ee saxaafadda madaxa banaan loo diiday ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin in ay u […]
AKHRISO: Maxaa ka soo baxay Madasha Maalgashiga Puntland ee Garoowe
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland ayaa soo gabagabeyey kulankii Maalgashiga oo socday 3dii maalmood ee lasoo daafay, waxaana laga soo saaray Warsaxaafadeed ku wajahan, waxaana ka muuqda qodobo horumar wanaagsan laga sameeyey. Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay […]
Ergayga gaarka ah ee QM U qaabilsan Soomaaliya oo ka hadlay arrimaha Soomaaliya.